KhunMoung ' s: June 2007
ကျွန်တော်အရင်တင်ခဲ့တဲ့ပို့စ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ NOD32အတွက် ဒေါင်းလုဒ်လင့်ခ်ပါ။ ဒီမှာဒေါင်းလုဒ် ရယူပါ။ NOD32နဲ့အတူ FlashyFix ပရိုဂရမ်ကိုပါ ရှဲထားပါတယ်။ FlashyFix ဒေါင်းလုဒ်လင့်ခ်။ FlashyFix ကို သုံးဖို့အတွက် NOD32လိုပါတယ်။ သုံးစွဲရတာ ပေါ့ပါးတဲ့အတွက် အခုလောလောဆယ် ဒီပရိုဂရမ်ကိုပဲ ကျွန်တော်သုံးနေပါတယ်။ အခုထိတော့ ကြိုက်နေတုန်းပဲ။ အရင်ကသုံးတာက Antivir Personal Classic Edition ကိုသုံးပါတယ်။ အခုတော့ ESET နဲ့ နှစ်ပါးသွားနေတယ်။
Get NOD32 here.
Don't restart when NOD32 installation is completed.
Install NOD32 Fix v2.2 exe.
Don't restart when NOD32 Fix v.2.0 is completed.
Click nod32fix.reg ( Location - Browse to C:\_Program Files\_Eset\_nod32fix.reg ).
Restart Now and then you have unlimited version of NOD32.
Get FlashyFix here.
Akon Feat. Eminem - Smack That (Dj Joey A Remix)
Akon Feat. Eminem - Smack That (xXxMiX)
Akon Feat. Eminem - Smack That (Dj Onur Remix)
Akon Feat. Eminem - Smack That (Promo Dance Remix)
Akon Feat. Eminem & Lil Jon - Smack That (EX-Con Remix)
'Cuz she be that lady
Maybe go to my place and just kick it, like Tae-Bo.
I'm'a call her. Then I put the mack down.
Maybe go to my place and just kick it, like Tae Bo.
Lookin' like one of them Pussy Cat Dolls.
Creeps up behind me and she's like, you're
NOD 32 of ESET
NOD32ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တခြားသော ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်ရေး ပရိုဂရမ်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့ ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။
NOD32 ဆိုတာ ESETဆိုတဲ့ Slovakia ကုမ္ပဏီ တစ်ခုက ထုတ်တဲ့ ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေး ဆော့ဝဲလ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်တွေ စပေါ်လာတဲ့ ၁၉၉၂ ကတည်းက ESETက ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကနဦး ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်တွေဟာ ကွန်ပျူတာ HardDiskရဲ့ BootSectorကို အဓိက ဒုက္ခပေးခဲ့တာပါ။ ချက်ဗ်ဘာသာစကား "Nemocnica na Okraji Disku" ("Hospital at the Edge of the Disk"လို့ အဓိပ္ပယ်ရတဲ့)စကားလုံးရဲ့ အတိုကောက် NOD ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ချက်ဗ်မှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်း "Nemocnica na Okraji Mesta"(Hospital at the Edge of the City)ကို အကြောင်းပြုပြီး နာမည်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ 16-bit Systemတွေအတွက် NOD-ICEကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ယခုသုံးနေကြတဲ့ 32 n 64-bit Systemsများအတွက် NOD-32ကို ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Firefoxကို Default Browserလုပ်ဖို့ Firefox > Tools > Options > Main > System Defaults > (checkmark) Always check to see if Firefox is the default browser on startup -> "Check Now" ကနေ မသွားပဲ Run Commandကနေ လုပ်တဲ့နည်းပါ။ လိုအပ်ရင်ပြန်သုံးနိုင်အောင် ဘလော့ဂ်မှာမှတ်ထားလိုက်တယ်။
၁. Exit Firefox completely
၂. Run Command
၃. firefox.exe -silent -nosplash -setDefaultBrowser
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ ...ဘလော့ကိုပစ်ထားတာလည်း ကြာပါပြီ။ ဘယ်ကစလို့ ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေကိုတော့ ဘယ်မေ့ထားနိုင်ပါ့မလဲ။ ကျွန်တော့် အဆောင်မှာ အင်တာနက်စပိ လိပ်လိုနှေးနေပါတယ်။ သုံးစားလို့မရလောက်အောင်ပဲ။ အဲဒါစိတ်ပျက်ပြီး အင်တာနက်တစ်လစာ ပိုက်ဆံမသွင်းပဲ နေနေလို့ပါ။ အဲဒီတစ်လအတွင်း စာပဲဖတ်လိုက်ဦးမယ်ပေါ့။ စိတ်မပါ လက်မပါ စာတွေတော့ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘော်ဘော်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပ၌ ရောက်ရှိနေပါသောကြောင့်ပါ။
ကျွန်တော့ ဘလော့ကို လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို ဒီကပဲ တစုတစည်းထဲ တောင်းပန်ပါတယ်။ သတိတရမေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို ကျွန်တော်ကလည်း သတိရနေကြောင်းပါ။ လူပျောက်ကြော်ငြာထည့်ထားတာကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှုမိပါကြောင်း။ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာတွင်းသို့ ယခု ပြန်လည်ချင်းနင်း ၀င်ရောက်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း။ ပိုစ့်အသစ်တင်ရန် စိုင်းပြင်းနေကြောင်း။
စက်ရပ်သတင်းအနေဖြင့် နာလန်ထလာတဲ့ အဆောင်က အင်တာနက်လိပ်ကြီးသည် ကြမ်ပိုးနဲ့ အပြေးပြိုင်ဖို့ စတင်ကြိုးစားနေပြီဖြစ်ကြောင်း ။ :P